उर्जा क्षेत्रमा एकरुपता ल्याउन समितिमा विज्ञहरु मनोनित
उद्योग वाणिज्य महासंघको उर्जा तथा वातावरण समितिमा मुलुकको उर्जा क्षेत्रको विकास र एकरुपता ल्याउनका लागि १० जना विज्ञहरुलाई मनोनित गरिएको छ । बुधबार समितिको पहिलो बोर्ड बैठकले विभिन्न क्षेत्रबाट उर्जा तथा वातावरण क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरेका १० जनालाई उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मनोनित गरेका हुन् ।
उर्जा तथा वातावरण समितिका सभापति गोपाल खनालका अनुसार मनोनित गरिएका १० जनामध्ये ४ जना सल्लाहकार र ६ जना सदस्य छन् । मनोनित हुने सदस्यहरुमा हिमालयन पावर पार्टनर्सका गुरुप्रसाद ढकाल, पद्य्माश्रीका निर्देशक ई. शुभासिस थपलिया, हाइटेन्सन प्रालिका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रकुमार अग्रवाल, विशाल प्लाष्टिकोप इन्ड्रष्टिज प्रालिका कार्यकारी निर्देशक ई. विवेक टाटेर, इपानका सचिव भरतप्रसाद खत्री र एफसीएएनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलश पाण्डे छन् ।
त्यस्तै सल्लाहकारमा उर्जा तथा हाइड्रोपावरका विज्ञ हाइड्रो सोलुसनका कार्यकारी अध्यक्ष ई. ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, एमभी दुगर ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष मोतीलाल दुगर, एभरेष्ट ग्याँस उद्योगका निर्देशक शिवप्रसाद घिमिरे र नेपाल इनर्जी डेभ्लपमेन्ट कम्पनीका मुख्य सल्लाहकार शेखर अर्याललाई समितिमा मनोनित गरेको अध्यक्ष खनालले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै महासंघ अध्यक्ष गोल्छाले नेपालको निजी क्षेत्रमा काम गर्दा एकरुपता आवश्यक भएको बताए । उनले भने, ‘उर्जा भनेकै विकास हो । त्यसैले विभिन्न भेगमा उर्जा पु¥याउन सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ । त्यसका लागि व्यवसायीहरुमै एकरुपता हुन जरूरी हुन्छ । त्यसरी काम गर्न समितिलाई आग्रह गर्छु ।’